Ihe ị ga-ahụ na Florence | Akụkọ Njem
Florencia Ọ bụ isi obodo nke Tuscany Italiantali mara mma, obodo ochie, nke mara mma, nke mara mma nke jupụtara na ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme. Ihe niile dị ebe a na-atọ ụtọ ma ọ bụ ya mere kwa afọ ọtụtụ nde ndị njem na-eleta ya. Ọ bụghị n'efu ka UNESCO kwupụtara ebe etiti ya Ihe Nketa Worldwa.
N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọtụtụ ndị ọbịa na-anọ ebe a ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ wee laa. Ọ bụghị ihe m na-adụ ọdụ, ekwenyere m na ọ dịkarịa ala ụbọchị anọ dị mkpa iji gaa ihe a ga-eleta ma zuru ike, na-agba ịnyịnya igwe ma ọ bụ na-eje ije. Kedu ihe ị ga-ahụ na Florence? Chọsie ike.
1 Florence, obodo ochie
2 Nlegharị anya nke Florence
Florence, obodo ochie
Na mgbe ochie Florence bụ obi azụmahịa na ego na ItalitaliO nwekwara otu n’ime obodo ndị kacha mkpa dị na kọntinent a. Ọ bụ okuku nke Renaissance, kwadoro ndị dị ike Ezinaụlọ Medici na isi mmegharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile dị gburugburu ebe a.
E kwupụtara etiti akụkọ ihe mere eme ya dị ka Ebe Ihe Nketa Worldwa na mmalite 80s, mana o nwere mgbọrọgwụ ọ bụghị na Middle Ages kama n'oge Rome oge ochie na n'oge gara aga, n'oge ndị Etruscan.
Ala na-ekwu okwu ya bụ bezin nke ọtụtụ ugwu gbara wee nwee isi mmiri ya bụ ama Osimiri Arno ọwa ha nwere ọtụtụ àkwà mmiri. Oge ọkọchị ya na-ekpo ọkụ, ogidi ya nke nwere ọtụtụ mmiri ozuzo na oge oyi ya na-enwe mgbe ụfọdụ ọmarịcha snowfall.
Nlegharị anya nke Florence
N’ezie, n’ihe banyere njem nlegharị anya enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee, ọkachasị maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme na nka n’anya. Enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, veranda, ụka, n'ámá. Malite na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, nke mbụ na ndepụta bụ Uffizi Osisi, otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mma n'ụwa.
Uffizi Gallery bu udiri ulo oru juputara na ime ulo mara mma nke ezoro n'ime ulo dika leta U. Ulo oru ulo bu Ntughari ohuru ma nye ya iwu ka Cosimo de 'Medici wuo Giorgio Vasari, nke dị n'akụkụ Palazzo Vecchio, oche nke ike ọchịchị. Nke ahụ bụ, a mụghị ya dị ka ebe ngosi ihe mgbe ochie mana emesịa bụrụ nke ọtụtụ puku mmadụ na-eleta kwa ụbọchị.
N'oge ha, ọ bụ naanị ezinụlọ ndị nwere ike ịbanye n'ihi na ebe a ka ha gosipụtara nchịkọta ihe osise ha bara uru maka ha na ndị enyi ha ma ọ bụ ndị ọbịa: mkpụrụ ego mgbe ochie, ihe odide, ihe ndị Rome, ọla, eserese Giotto na Cimabue, Masaccio, Paolo Uccello ma ọ bụ Pietro della Francesa na nchịkọta ya nke eserese ducal. Ubochi omumu Venus dịkwa ebe a, otu ihe ahụ nnukwu Ala nke opupu ...
Michelangelo, Raphael, da Vinci, Ha bụ ndị ọzọ nke nnukwu omenaala ị ga-ahụ ebe a. N'ikpeazụ, a zuru ezu: na Vasari corridor nke jikọtara Uffizi na Palazzo Vecchio na Pitti Obí dị n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri ahụ. Ọ bụ kilomita nke ogologo ma malite na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX.
Zọ mbata na Uffizi Osisi na-efu 12 euro n'etiti November na February na euro 20 n'etiti Machị na Ọktọba. Ntinye bụ n'efu na Sọnde mbụ nke ọnwa. Ọ na-emepe malite n ’elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ. Emechiri na Mọnde.
Ọzọ aro ngosi nka bụ Ulo akwukwo nke ulo akwukwo, ebe bụ ihe oyiyi a ma ama nke David nke Michelangelo dere. Ke adianade do, ihe mbụ ị na-ahụ bụ na-akpọ Halllọ Nzukọ nke ndị Kọlọsi, taa na a nnukwu ihe oyiyi nke Ighapu ndi Sabine Women nke Giambologna dere. Enwekwara ime ụlọ nwere ọtụtụ eserese yana ngosipụta dị mma nke ngwa egwu na nka okpukpe Gothic. Ma o doro anya na kpakpando ahụ bụ Devid. Ọ dị mma ịga n'oge na-adịghị anya tupu emechie n'ihi na ọ na-eme onwe ya ka ọ ghara ịdị ka nke ndị mmadụ.
Ọnụ ụzọ na-efu 8 euro na igbe ọrụ na-emechi na 6: 20pm. Thelọ ihe ngosi nka mepere site na 8: 15 ruo 6: 50 na mgbede, Tuesday ruo Sunday. Emechiri na Mọnde. Thirdlọ ihe ngosi nka nke atọ bụ ụka, Chọọchị Santa Maria Novella ya e ji mara mara marble facade. Ọ bụ Gothic n'ụdị ma ọ bụrụ na ọ naghị adọta uche gị n'èzí maka N'ime ya mara mma nke ukwuu n'ihi na ọ nwere ọrụ nke Giotto, Masaccio ma ọ bụ Ghirlandaio.
Ntinye bụ euro 5 ma ọ na-emeghe kwa ụbọchị. Eeh, ị nwere ike ịdekọ ma ọ bụ were foto, na-enweghị ọkụ. Tupu anyị akpọ aha Palazzo Pitti. Ọ dị ukwuu ma ọ bụrụ na echiche gị bụ ileta ya n'otu ụbọchị ị kwesịrị ime ime n'ime ụtụtụ na ubi ya n'ehihie. Ha abụọ bara uru! n'ime bụ Osisi Palatina, narị afọ anọ nke ịdị mma na akụnụba site na ọrụ nkà site n'aka Raphael na Rubens. A mara mma nke frescoes, veranda na ime ụlọ ihi ụra (ụlọ ducal na ụlọ ndị eze, dịka ọmụmaatụ), nke ezinụlọ na-eji.
N'èzí bụ Ogige Boboli, buru ibu ma maa mma. Ozugbo ị banyere ha, a na-eme ha ka ụlọ egwuregwu amphitheater, nke akpụrụ akpụ na ụzọ ya, ma mgbe ị na-apụ, ị nwere ike ịga n'okporo osisi nwere ohia rose nke na-ezobe obere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ọzọ ma ọ bụ na-aga ije ma rute n'ubi ndị ọzọ dị egwu site na ebe ị nwere ike lee Arno na obodo ahụ. A ebube ebube.
Mụ onwe m kwadoro Palazzo Davanzati. Ọ dị ọnụ ala ma pere mpe, dị mfe, mana ọ na-atọ ụtọ n'ihi na ọ na-eme ka ị hụpere ndụ nkịtị nke ezinụlọ bara ọgaranya na Flroencia. Ọ bụghị ụlọ eze, enweghị ọrụ nka, mana ị hụrụ ụdị ndụ ọgaranya dị n'obodo na Middle Ages: ime ụlọ ihi ụra, steepụ, kichin, ime ụlọ na ọbụna ime ụlọ ịwụ. Pearl ọzọ bụ Telọ ihe nkiri Dante raara nye ndụ onye edemede na ọrụ ya (Vía Margherita, 1) ma ọ bụ mara mma Museumlọ ihe nkiri Galileo.
Muselọ ihe ngosi nka ndị ọzọ ileta bụ Bargello Museum, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile raara nye ihe ọkpụkpụ, Icilọ Medici nke bụ akụkụ nke Churchka San Lorenzo, nwere ụfọdụ ili Medici ma buru mbinye aka nke Michelangelo. Ntinye na-akwụ ụgwọ euro 8 ma mepee site na 8: 15 ruo 5 na mgbede. E nwekwara Ebe ngosi ihe nka nke Opera del Duomo na ngosipụta nke ngwa ọrụ Brunelleschi ji rụọ dome, dịka ọmụmaatụ.
Ma o doro anya, ị nwere ike ịkwụsị ịmara ihe Baptist na Katidral. Limrịgo elu na dome ya enweghị ọnụ ahịa, mee ya! Roadzọ n'onwe ya, dị warara ma saa mbara, na nnukwu echiche bụ ụgwọ ọrụ kacha mma. Ma ọ bụrụ na ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ were bọs, ị nwere ike iru akụkụ nke obodo ahụ wee mata obere na enyi Chọọchị nke San Minniato al Monte. Echiche dị mma ma nwee ebe ili ozu na-atọ ụtọ.
N'ikpeazụ, obodo nke Florence nwere njem nleta kaadị, na Firenze Kaadị kedu ihe ọ na-eri 85 euro. Dị ka ọ dị na mbụ, jiri ụdị kaadị a, ị ga-eme mgbakọ na mwepụ iji hụ ma ọ dabara adaba ma ọ bụ na ọ bụghị. Anọgidere m na Florence ruo ụbọchị ise ma ahụghị m ihe niile. Nke ahụ bụ, ma ị ga-azụta ya ma ọ bụ na ọ dabere na ị dabere na ọdịmma gị yana oge ị ga-anọ n'obodo ahụ. Kaadị ahụ Ọ dị irè maka awa 72 ma nye ohere nleta ọ bụla na ebe ngosi nka.
Taa, e nwekwara Firenze Kaadị +, Euro 5 ọzọ, nke gunyere na-akparaghị ókè ojiji nke tram na ụgbọ ala, weta ntuziaka ụlọ ngosi ihe nka na akpa. Eziokwu, ọ bụrụ na ị gaa obodo na obere oge, ị nọrọ na etiti naanị ị nwere mmasị na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa, ịkwesighi ịzụta ya. Ugbu a, ọ bụrụ na ịnọ karịa ụbọchị atọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ọtụtụ nleta maọbụ ọ bụrụ na ị gaa n'oge ọkọchị mgbe enwere ọtụtụ mmadụ, ọ dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Florencia » Ihe ị ga-ahụ na Florence
Ihe ị ga-ahụ na Balkans